နေအိမ် » DMCA
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ ("DMCA") | SActivator.com
Sactivator.com အတူလိုက်နာမှု၌ရှိ၏ 17 U.S.C. § 512 ပြီးနောက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ ("DMCA"). မည်သည့်ချိုးဖောက်မှုသတိပေးချက်များတုံ့ပြန်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေအောက်မှာသင့်လျော်တဲ့လုပ်ရပ်ယူတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်လစီကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ("DMCA") နှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေတွေ.
သင့်ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်းကိုအပေါ် posted ပြီဆိုရင် sactivator.com သို့မဟုတ်သင့်တွင်မူပိုင်ခွင့်ရပစ္စည်းကိုမှလင့်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားဖြင့်ပြန်ရောက်ကြပြီသင်တို့သည်ဤပစ္စည်းကိုဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျအောကျပါအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကရေးသားထားသောဆက်သွယ်ရေးပေးရမညျ. သငျသညျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ပါလိမ့်မည်ကိုသတိထားပါ ကျေးဇူးပြု. (စရိတ်နှင့်ရှေ့နေများ '' ကြေးအပါအဝင်) သင်သည်သင်၏မူပိုင်ခွင့်အပေါ်ချိုးဖောက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်ရှေ့နောက်လျှင်.
သင်တို့သည်လည်းမှန်ကန်သော email address ကိုပါဝင်ရမယ်.
သင့်အနေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်အလုပ်ချိုးဖောက်ခဲ့ကြရန်ပြောဆိုထားသည်နှင့်ပစ္စည်း sactivator.com ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွက်ပုံအောက်တွင်အနည်းဆုံးတစ်ရှာဖွေရေးသက်တမ်းအပါအဝင်လုံလောက်သောအသေးစိတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါမည်.
အဝေဖန်ခံရပါတီထုံးစံအတွက်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှု၏ညည်းညူကကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်မှုရှိကြောင်းတစ်ဦးကကြေညာချက်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မပါ, ၎င်း၏အေးဂျင့်, သို့မဟုတ်ဥပဒေ.
ထိုအကြောင်းကြားစာအတွက်သတင်းအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်ကြောင်းတစ်ဦးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်, နှင့်မုသားသက်သေခံမှု၏ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာ, အဝေဖန်ခံရပါတီစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ကိုထိပါးသည်ကိုတစ်ဦးသီးသန့်ပိုင်ခွင့်၏ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားအပေါ်ပြုမူဖို့ခွင့်ပြုချက်ကြောင်း.
Ling ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ Internet Service Provider ကဲ့သို့သောအခြားပါတီများရန်သင့်တိုင်ကြားချက်ကိုသင့်တောင်းဆိုမှုကိုအလျင်စလိုမည်မဟုတ်စနစ်တကျတင်သွင်းခံရမတိုင်ကြားချက်ကြောင့်နှောင့်နှေးတုန့်ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သည်.
DMCA ခင်မှာသေချာတာပေါ့ Be